Papa Pear Saga Facebook ngumdlalo ukusuka eKing, kubabhekisi phambili be Candy Crush kunye Pet Rescue Saga.
Injongo yomdlalo kukuba eluncedo Papa Pear ebuyile ehlabathini kwihlabathi ngokubalulekileyo wacky of izikhonkwane elinuka, imbewu kunye nobomvu crazy. Kufuneka ukuba zikhanyise yonke amabhakethi rhoqo ezantsi kwekhusi. Ngenxa ukucwangciswa ngenyameko ejolise ungenza kakhulu amandla angapheli Papa Pear kaThixo. Amakhuba abahlobo bakho ukuba linqaku ilungileyo ngaphezu 100 fun, elinuka kunye namazinga nanini umngeni.
Lixesha isigqila fast and fun enkulu!